टाइट बेल्ट बाँध्ने बानी छ ? यो लेख अवश्य पढ्नुस | Rajmarga
टाइट बेल्ट बाँध्ने बानी छ ? यो लेख अवश्य पढ्नुस
तपाई हामी अधिकांशलाई दिनहुँ कम्मरमा बेल्ट बाँध्ने बानी परिसकेको छ । तर,यो बानीले समस्या पनि सिर्जना गर्न सक्दछ । जब हामी दिनहुँ टाइट बेल्ट बाँध्ने गर्दछौ, त्यसले अनेक समस्या निम्ताउन सक्छ ।
टाइट बेल्ट बाँधेका कारण दिनभर पेटको नर्भ्स दबिने गर्दछ । यस्तो लामो समय गर्दा पेल्भिक रिजनबाट निस्कने आर्टरी, भेन्स, मसल्स र आन्द्रामा दबाव सिर्जना हुन्छ ।
यसका कारण स्पर्म काउन्ट कम हुन सक्छ । जसका कारण पुरुषको प्रजनन क्षमता घट्ने आशंका बढ्दछ । आयुर्वेद विशेषज्ञ डाक्टर अबरार मुल्तानीका अनुसार बेल्ट लगाउन आवश्यक नै छैन । यदि लगाउनु नै छ भने पनि बेल्ट नकसी लगाउनु उत्तम हुनेछ । डाक्टर मुल्तानीका अनुसार दिनहुँ बेल्ट बाँध्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आउन सक्छ ।
कोरियन अध्ययनकर्ताहरुले १२ जना पुरुषमा गरेको अध्ययनअनुसार कम्मरमा टाइट बेल्ट बाँध्दा एब्डोमिनल मसल्सको काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुन्छ । अध्ययनबाट यो पनि पुष्टि भएको छ कि लामो समयसम्म टाइट बेल्ट बाँध्दा मेरुदण्डको हड्डीमा अड्कन आउन सक्छ ।
साथै सेन्टरअफ ग्राभिटीमा पनि परिवर्तन आउने गर्दछ । यसका कारण घुँडाका जोड्नीमा बढी दबाव सिर्जना हुने गर्दछ । जसबाट जोड्नीमा दुखाईको समस्या बढ्ने गर्दछ ।
टाइट बेल्ट बाँध्दा खाना पचाउने काम पनि ठिकसँग हुँदैन । एसिडीटीको समस्या बढ्न सक्छ । यसबाट कब्जियतको समस्या पनि सिर्जना हुन सक्छ । बेल्ट टाइट बाँधेकै कारण खुट्टाको हड्डी कमजोर हुन थाल्छ । प्रजनन क्षमतामा सिधै असर पुराउछ । एजेन्सी
Previous post: स्वास्थ्यमा मोटोपनबाट होइन, यस्ता कुराबाट सचेत रहनुस
Next post: यस्तो रहेछ विश्व अर्थव्यवस्थामा सेक्सको प्रभाव, गरिबी बढाउन सेक्सको मुख्य भूमिका
शान्त नेतृत्वु के हो ? र, यस्तो गुण भएका व्यक्ति किन राम्रो हाकिम बन्न सक्छन् ?
निर्देशक बन्दै महानायक राजेश हमाल
यी पाँच राशि भएका महिला हुन्छन् अधिक चलाख र बुद्धिमान
श्वेता खड्काको विवाह (फोटोफिचर)
थाहा पाइराख्नुस आज आइतबारको राशिफलमा कस्तो छ तपाईको भाग्य ?
जोखिममै सङ्क्रमित गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउँदा…
गर्भाधानका बेला सेक्सः कति सही कति गलत ?
तपाईलाई थाहा छ महिलामा स्पर्श पहिचान क्षमता बढी हुन्छ ?
पार्टनरलाई यौन सन्तुष्टी दिन सक्नु भएन ? यसरी गर्नुहोस सेक्स…
यी ४ कुरा भएका घरमा नबस्नुस्ः सँधै खतरा हुन्छ (चाणक्य)
तपाईलाई थाहा छ जन्म महिनामा निर्भर छ सफलताको रहस्य